जानीराख्नुस है ! खाली पेटमा यति खतरनाक हुनसक्छ ‘ग्रीन टी’ – Halkhabar kura
जानीराख्नुस है ! खाली पेटमा यति खतरनाक हुनसक्छ ‘ग्रीन टी’
एजेन्सी । पेटको बोसो घटाउनको लागि महिलाहरु प्रायः ‘ग्रीन–टी’ पिउने गर्छन् । तर एक वा दुई कपभन्दा बढी ग्रीन–टीले शरीरलाई फाइदाभन्दा बढी नोक्सान गर्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । धेरै वटा देशमा गरिएको अनुसन्धानमा ग्रीन–टीमा भएको क्याफिनले भोक नियन्त्रण गरे पनि यसले शरीरमा अन्य समस्याहरु पैदा गराउँछ ।
यो पनि पढ्नुस, ग्रीन टी स्वास्थ्यका लागि अति नै लाभदायक हुन्छ । यसले ब्याड कोलेस्ट्रोललाई घटाउँछ र हृदयघातदेखि स्ट्रोकसम्मका विभिन्न रोगहरुको जोखिम कम गर्छ भन्ने कुरा हार्वडे मेडिकल कलेजको एउटा सर्वेक्षणमा प्रमाणित भएको छ । तर राती सुत्नु अगाडि ग्रीन टी पिउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा धेरै मानिसहरुको जिज्ञासा रहेको छ ।
ग्रीन टी अल्जाइमरदेखि डिमेन्सियासम्मको रोगहरुमा फाइदाजनक हुन्छ । ग्रीन टीमा त्यस्तो तत्व पनि हुन्छ, जसले डिप्रेसन कम हुन्छ । ग्रीन टीमा समावेश एन्टि(अक्सिडेन्टले तपाईंको शरीरलाई राहत प्रदान गर्छ र तनावलाई घटाउँछ । ग्रीन टीमा अमिनो एसिड ए(थिएनाइन हुन्छ, जसले तपाईंको डोपामाइनलाई बूस्ट गर्छ र तपाईंको मुड पनि ठिक हुन्छ ।
Previous बलिउडकी सुन्दर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ४४ वर्षको उमेरमा दोस्रो बच्चाको आमा बनिन्
Next सुनको भाउ बढेर आज ७८ हजार आठ सय रुपैयाँमा कारोबार, अहिलेसम्मकै महंगो